Ixesha eli-10 Iitheyibhile zokusebenzela zokukhuphela nokuprinta
Ixesha eli-10 Iitheyibhile zokuPhucula iiWebhu
Iifayile zokuSebenza zamahhala ukuya kwii-Times Times
Amaphepha okusebenzela enza kube lula ukwenza amacwecwe okuphindaphinda amaxesha. Izithombe zeMint - David Arky, Getty Images
Ezi zijolise kumaphepha okusebenzela agxininisa ukuphindaphinda amadijithi ama-2 ngeenombolo ezilishumi. Injongo kukuba abantwana babe zizenzekelayo nganye kwietafile. Itafile ezilishumi zihlandlo enye yeetafile ezikhawulezayo zokufunda kwaye xa abantwana bekwazi ukunqumla isibalo ngamashumi (10, 20, 30, 40) ukuqala ngamanani ahlukeneyo, ngoko sele bekulungele ukufunda izihlandlo ezilishumi.
Qinisekisa ukuba ulandelelanise ukulandelelana kokufunda amaxesha amacwecwe. Ukufunda ngokungaqhelekanga kwezinto ezinqabileyo kunokukhokelela ekufundeni ngokusisigxina. Njalo qalisa ngamaxesha aphindwe kabini, amacwecwe amahlanu kunye namaxesha amathandathu. Emva kokuba abo bazinikezele kwimemori, hambani kwizikwere ezinjengezihlandlo ezibini, izihlandlo ezithathu kathathu, ezine izihlandlo ezine njl. Gxininisa emine, ezisixhenxe kunye nesibhozo. Amaxesha angamaxesha angaqhelekanga kufuneka asetyenziswe kuphela ekuncedeni ngokuzenzekelayo xa kukho iithayibhile ezilula ziyaziwa kwaye ijubane lujoliswe.
Kukho imidlalo emininzi yokunceda abantwana bafunde ixesha lexesha elidinga kakhulu kwaye lingenziwa ekhaya okanye eklasini. Ukufumana abantwana ukwenza amaxesha okubamba imemori kubaluleke kakhulu namhlanje njengoko bekuyiminyaka engama-50 edlulileyo. Iimatimatika zengqondo zisetyenziselwa rhoqo kwiimeko ezininzi iintsuku kwaye ziya kuba nobuchule obude obude.
10 Iimviwo zeeTable Times Worksheet 1 ye-10
10 amaxesha amaxesha 1 kwe-10. D. Russell
10 x Iphepha lokusebenzela elijoliswe ku-1 eli-10
Iithagethi ezijoliswe kwixesha elichanekileyo linomlinganiselo ophakathi phakathi kwe-10, inamba nganye ngaphandle ivela kumnye ukuya kwisithoba anesithoba, abantwana bawandise inani elijoliswe kuyo ngendandatho ephakathi kwaye bafake impendulo kwindandatho yangaphandle. Ixesha lisebenza kakuhle ngeli hlobo lomsebenzi. Emva kokubhenca kwiimbalwa ezimbalwa, badlale udlala iwashi efuna ukurekhoda ukujonga ukuphuculwa. Ukwenza iindinyaniso zokuphindaphinda kwimemori kuthatha ixesha kunye nokusebenza. Ndiya kuncomela imizuzu emihlanu ukuya kweyesixhenxe imizuzu emine okanye ezintlanu ngeveki ade baziwa. Sitshintshile, yenza umdlalo womdlalo, imidlalo yempapa kunye namakhadi okusebenzisa okanye idayisi ukugcina ukukhawuleza kuhamba.
10 Iingxelo zeeTables zePhepha lokuSebenza 2 kwe-10
10 amaxesha ama-2 e-10 D. D. Russell
10 x Iingqinisiso Zephepha lokusebenzela eli-2 kwe-10
10 Iimviwo zeeTables zePhepha lokuSebenza 3 kwi-10
10 amaxesha amaxesha 3 kwi-10. D. Russell
10 x Iingqinisiso Zephepha lokusebenzela eli-3 kwi-10
10 Iingxelo zeeTables zePhepha lokuSebenza 4 kwi-10
Amaxesha amaxesha ama-4 e-10. D. uRussell
10 x Iphepha lokusebenzela elijoliswe ku-4 kwi-10
10 Iingxelo zeeTables zePhepha lokuSebenza eli-5 kwi-10
10 Amaxesha ama-5 ama-10. D. D. Russell
10 x Iphepha lokusebenzela elijoliswe ku-5 kwi-10
10 Iifayile zeeTables Worksheet Worksheet 6 kwe-10
Amaxesha amaxesha ama-6 kwe-10. D. uRussell
10 x Iingqinisiso zokuSebenza ezijoliswe ku-6 kwi-10
10 Iifayile zeeTables Worksheet Worksheet 7 kwi-10
Amaxesha amaxesha ama-7 kwi-10 D. D. Russell
10 x Iphepha lokusebenzela elijoliswe ku-7 kwi-10
10 Iifayile zeeTables Worksheet Worksheet 8 kwe-10
10 Amaxesha amaxesha 8 kwi-10. D. Russell
I-10 x Iphepha lokusebenzela elijoliswe ku-8 kwi-10
10 Iimviwo zeeTables zePhepha lokuSebenza eliPhambili kwi-10 ye-10
10 Times Facts 9 kwe-10. D. Russell
10 x Iphepha lokusebenzela elijoliswe ku-9 kwe-10
10 Iimviwo zeeTables zePhepha lokuSebenza 10 kwi-10
10 amaxesha amaxesha 10 kwi-10 D. D. Russell
10 x Iingqinisiso zoHlelo lokuSebenza 10 kwi-10
3-Digit Worksheets Worksheets
Ziqhelanise Ukuphindaphinda Kwakho Ngezicwangciso Zemiqulu Yomsebenzi
Ukuphindaphinda iWebhu yeeSpafa zeeSpafa - Izimpendulo ngomhla wesi-2 Pg. ye PDF
2 Iifayile zeeNkcazo zeeNkcazo eziNyaniso
Indlela yokujikeleza iinombolo
Iifayile zokuSebenza eziSiseko zoKhenketho
Ukuxazulula iingxaki zeepesenti
Ukukhupha okusisiseko Iifom zokusebenzela kwi-20
Yintoni uMyalelo weMisebenzi kwiMathematika?
Ukuhlukana kweeNkalo zeMathematika yokuFunda
Iingoma zeHaley Reinhart - Ixesha le-10 le-American Idol
Imibala yeeLeaf yokufunda iyingqayizivele kwimindeni yesihlahla
I-Head-to-Toe Ijongene neWormu yakho yeGalofu
Ziziphi Iingxowa ZePolar?
2002 I-US Vula: uNombolo 2 yeTiger Woods
Okubambalwa kakhulu kubeka i-Round Round kwi-PGA Tour
Indlela yokusebenzisa isenzi sesiFrentshi "Vivre" (ukuze uphile)
Umzi weSesame Seed - Isipho sangasese saseHarappa
Imali yePlastiki yaseCanada iyintsimbi
Ukusebenzisa i- 'Si' Amagatya
Ama-Equites ayengamaKarights aseRoma
Iikholeji eziphezulu zaseMichigan
I-Italy Open Open Golf Tournament kwi-European Tour
Kutheni ufuna ukukhetha iSikolo soBodwa ngesini
Konke malunga neSenzi sesiFrentshi saseLouis 'Laisser' ('Ukushiya')
Iingelosi ze-Guardian eHindu
Ukwakha iWebhu yeWebhu yeWebhu kwiPython
Funda ngeZine Ele Elements
Imbali yeSifo Sikashukela: Indlela I-insulin Ephantse Ayifumananga ngayo
I-Enterprise yamahhala kunye nenxaxheba kaRhulumente eMelika
Indlela yokudala i-Glock Thick kwi-Painted Acrylic
Umthetho weMilinganiselo emininzi Inkcazo - i-Kemistry Glossary